Donald Trump oo xil sare u magacaabay nin qaba gabadhiisa Ivanka Trump – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Donald Trump oo xil sare u magacaabay nin qaba gabadhiisa Ivanka Trump
Madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xil u magacaabay nin uu sodog u yahay oo lagu magacabo Jared Kushner, kaas oo ka mid noqon doonna la-taliyihiia sare ee Aqalka Cad.
Jared Kushner oo 35-sano jir ah ayaa la sheegayaa inuu kaalin muhiim ah ka ciyaaray ololihii Donald Trump uu xilka ugu tartamaayay, waxaana hore loo hadal haayay in xilkaan loo magacaabi doono.
Mr Kushner oo qaba gabadha uu dhalay Donald Trump ee Ivanka Trump ayaa ah maalqabeen u dhashay Yuhuud, wuxuuna ka shaqeeyaa mashaariicda dhulka, kaas oo leh dano ganacsi oo ballaaran, waxayna shaqadiisa cusub ee Aqalka cad ku saabsanaan doontaa dibadda iyo gudaha Mareykanka.
Xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo magacaabida uu Donald Trump ku magacaabay Jared Kushner, taas oo ay sheegeen mid ka hor-imaanaysa sharuucda u degsan dalkaasi Mareykanka.
Madaxda dowlada Mareykanka ayaa mamnuuc ka ah inay wax xilal ah u magacaabaan xubno kamid ah qoyskooda.
Dhinaca kale, xisbiga madaxweyne Donald Trump ee Jamhuuriga ayaa ku doodaya in sharuucdaasi ay la xariirto oo kaliya xilalka golaha wasiirada balse madaxweynaha uu u madax banaan yahay ciduu u dhiibayo xilalka ku kooban madaxtooyada Aqalka cad ee dalkaas.